Wararka Suuqa Caawa: Edinson Cavani oo ka laabtay go’ankiisa Man United, Sheekada Franck Kessie iyo Qodobo kale | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Wararka Suuqa Caawa: Edinson Cavani oo ka laabtay go’ankiisa Man United, Sheekada...
Wararka Suuqa Caawa: Edinson Cavani oo ka laabtay go’ankiisa Man United, Sheekada Franck Kessie iyo Qodobo kale
Xiddiga Milan ayaa qarka u saaran inuu ka tago Italy sanadka 2022 Xiddigan qadka dhexe ayaa xiiso ka helaya Manchester United iyo Chelsea Franck Kessie ayaa doonaya inuu u dhaqaaqo Premier League – sida laga soo xigtay 90min .
Liverpool ayaa ka mid ah kooxaha isha ku haya garabka Sampdoria Mikkel Damsgaard. sida uu qabo Fichajes ,
Qiimaha suuqa ee Victor Osimhen ayaa cirka isku shareeray tan iyo markii uu yimid Napoli – sida uu ku warramayo Calcio Mercato .
Edinson Cavani ayaa ka laabtay qorshihiisii ​​ahaa inuu sii joogo Manchester United wuxuuna haatan doonayaa inuu baxo inta lagu jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo, sida ay sheegtay El Grafico .
Jonathan Tah ayaa heshiis cusub u saxiixay Bayer Leverkusen, sida ay kooxdu shaacisay. Bayer Leverkusen.de
Takehiro Tomiyasu ayaa sharraxay sababta uu u diidi waayay inuu u wareego Arsenal lacag dhan £ 16 milyan oo u dhiganta ($ 22m), iyadoo daafaca heerka caalami ee reer Japan uu Gunners u arko inay tahay “mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn adduunka”. Goal
West Ham ayaa wadahadalo la furtay xiddiga qadka dhexe ee kooxda Juventus Weston McKennie – sida laga soo xigtay Football Insider .
Arsenal ayaa hogaamineysa loolanka loogu jiro saxiixa xiddiga Club Brugge Noa Lang – sida laga soo xigtay Voetbal 24 .
Borussia Dortmund ayaa isha ku heysa inay u dhaqaaqdo da ‘yarka West Brom Reyes Cleary – sida laga soo xigtay Daily Mail .
Previous articleLiiska: 8 Kulan ee ku soo wajahan Man United oo go’aaminaya Mustaqbalka Ole Gunnar Solskjaer
Next articleCabdi Xaashi: Midnimada Soomaaliya iyo gooni isu-taagga Somaliland midna muqadas maaha (Daawo)